हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा लभ स्टेसनले गर्यो सहयोग, सबैलाई यस्तो आग्रह ! — Motivatenews.Com
हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा लभ स्टेसनले गर्यो सहयोग, सबैलाई यस्तो आग्रह !
तराईको विपतमा ‘लभ स्टेशन’ टिमले सहयोग गर्दै सबैलाई गर्यो यस्तो अपिल !
काठमाडौँ । फिल्म ‘लभ स्टेसन’ टिमले तराईको बारा र पर्सामा राहतस्वरुप ५० हजार सहयोग गरेको छ । जिल्लामा असिना पानीसँगै हावाहुरीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई ५० हजार सहयोग गरेको हो । क्षतिग्रस्त क्षेत्रमै गएर सेवा गर्न नसके पनि आफुले सक्दो सहयोग गरेको नायक प्रदिप खड्काले बताए ।
उनले क्षति ग्रस्त इलाकामा पुग्न नसक्नुको कारण खुलाउँदै भने, ‘हिजो बारा पर्सामा धनजनको क्षति भएको खबरले निकै दुःखी भएको छु । साथै अच्चम पनि लागि रहेको छ । मैले यस्तो खबर पहिलो पटक सुनेको हो । यो खबर सुनेपछि कसरी सहयोग गर्न भन्ने सोच्यो । त्यहाँ जाने वातावरण पनि भएन । हाम्रो फिल्म रिलिज हुन तीन दिन मात्रै बाँकी छ । त्यहाँ गएर सेवा गर्न नसके पनि सहयोग गर्ने सोच बनाएका हौं ।’
उनले सहयोग गर्न चाहनेलाई विपत व्यवस्थापन कोषबाट सहयोग गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘यो संस्थाले आकस्मिक रुपमा विपतमा फसेका व्यक्तिहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको रहेछ । हामीले पनि सजिलो र भरपर्दो माध्यमको लागि विपत कोष नै रोज्यौ । हामीले तत्काल राहतका लागि ५० हजार सहयोग गरेका छौं । तपाईहरु पनि सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ, र आफुले सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्दछु ।’
प्रदीप र जसिताको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘लभ स्टेशन’ यही शुक्रबार अर्थात चैत २२ गतेदेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउदैँछ जसको प्रचारमा अहिले टिम युद्धस्तरमा अगाडी बढेको छ ।